YKKO : Kyay-Oh & BBQ
YKKO ရဲ့ Cook@Home ကြေးအိုးထုပ်များ
Cook@HomebyYKKO ဆိုတာ အချိန် ၅ မိနစ်ပေးရုံနှင့် အိမ်မှာအလွယ်တကူပြန်လည်ပြန်လည်ချက်စားလို့ရနိုင်တဲ့ ကြေးအိုးထုပ်‌လေးတွေပါနော်
ကြေးအိုးထုပ်ထဲမှာ အသားတွေကော အသားလုံးတွေကော တစ်ခါတည်းပါပြီးသားဖြစ်ပြီး ဆိုင်ကအရသာနဲ့လည်း တစ်ထပ်တည်းမို့ အိမ်မှာကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့ Cook@Home ကြေးအိုးထုပ်လေးတွေကို အခုပဲဝယ်ယူလိုက်တော့နော် ……
YKKO နှင့်အတူအမြဲအဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေဖို့ရယ် နေ့စဉ် Promotion တွေကိုအလွယ်တကူသိနိုင်ဖို့ရယ်နောက်ပိုင်း အထူးကံစမ်းမဲအစီအစဉ်လေးတွေမှာ ပါဝင်နိုင်ဖို့ရယ် YKKO ရဲ့ Viber Community Channel လေးကို Join ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော် YKKO Viber Community ထဲဝင်ဖို့ ဒီ Link လေးကိုနှိတ်လိုက်ရင်ရပြီနော် …
ပုံထဲက QR လေးနဲ့လည်းဝင်လို့ရပါတယ်နော် …
YKKO မှာ ကြေးအိုး၊ အကင်၊ အအေးအပြင် တခြား Menu တွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲက ရှူးရှူးရှဲ Menu လေးတွေကလည်း လူကြိုက်အများဆုံးထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်နော်။ ရှူးရှဲဆီချက်၊ ရှူးရှဲစွပ်ဆိုပြီး (၂)မျိုးရှိကာ အစပ်အရသာကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် အထူးကောင်းမွန်တဲ့ Menu လေးပါ 🌶🌶🔥🔥
ပြီးတော့ အိမ်မှာပဲနေနေ၊ ရုံးမှာပဲစားစား အလုပ်မရှုပ်စေတဲ့ အရသာ (၂၁) မျိုးပါဝင်တဲ့ Yan Kin Express Meal Boxes လေးတွေပဲရဉီးမယ်နော် 🍱🍱
© 2021 YKKO : Kyay-Oh $ BBQ. All Rights Reserved.
Menus * ဝက်ကြေးအိုး (Pork Kyay-Oh)ဝက်ကြေးအိုး (Pork Kyay-Oh)ဝက်ကြေးအိုးဆီချက် (Pork Kyay-Oh Sichet)ကြက်ကြေးအိုး ( Chicken Kyay-Oh)ကြက်ကြေးအိုးဆီချက် (Chicken Kyay-Oh Sichet)ငါးဖယ်လုံး ( Fish Ball )ဝက်သားလုံး (Pork Meatballs)ကြက်ကင် ( Grilled Chicken)ကြက်ဆီဗူးကင် ( Grilled Chicken Sibu)ကြက်တောင်ပံကင် ( Grilled Chicken Wings)ဝက်ကင် ( Grilled Pork)ဆိတ်ကင် ( Grilled Mutton)ကြက်ဆာတေး ( Chicken Satay)ဝက်ဆာတေး (Pork Satay)အာလူးထောင်း (Mashed Potatoes)ကြက်ပေါင်း (Steamed Chicken)